Ngokombono bokuphila orgasm - ukwehla kwe amaqembu kwemisipha njengamanje kuwumphumela a ukuqhanyelwa eqinile ngokobulili. Kukhona izincazelo eziningi eside. Livela orgasm ngokuyinhloko ephathelene nomsebenzi ingqondo. Excitation ngokufanele therein injabulo ezindaweni kwenzeka ngenxa wathumela umthondo pulses futhi kuholela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili.
Ubulili ukuphila - ngesihloko ebucayi sasivumela umuntu ovamile imizamo bavame ukuba bahlale. Izinkinga ubulili kuhilelani eziningi nezinye izinkinga. Man abanelisekile ngokuphila impilo yabo yezocansi ibe nomunye wesifazane, ngokuvamile ngifuna izixhumanisi ohlangothini. Lo wesifazane, kungekho ukwaneliseka ukusondelana akakwazi ukunaka kule qiniso ekuphileni kwakhe konke. Ngokumangalisayo, nengxenye yabantu abahlala umshado futhi enabantwana abesifazane Russian ngiyizwe orgasm. Ezinye zazo uyakholelwa ukuthi orgasm sowesifazane - lena yinto ezingadingekile, kusukela ngaphandle ukuwufinyelela ongenza eyinhloko yayo, uma kubhekwa isimo isibopho - uyozala inzalo. Umbono onjalo uphambene sibi. Ithola ukujabulela ucansi futhi esivela njalo owesifazane ngokwemvelo. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo orgasm e abesifazane zahlukahlukene ngempela. Sekukonke kunezinhlobo ezine.
Ngokokuqala ngqá isihloko orgasm zesifazane balithanda "uyise olukhulu psychoanalysis", Austrian Freud sasho. Waqala cabanga orgasm akuyona iphuzu bokuphila buka, kodwa kusukela umbono wezifo zengqondo. Ukungakwazi ukuthola injabulo yobulili contact abesifazane balibheka njengencwadi frigidity. Freud ngamnyama lezi zinhlobo ezilandelayo orgasm kwabesifazane: lwesitho sangasese sowesifazane kanye clitoral. Ngo eminye yemisebenzi yakhe, ukungakwazi ukuthola orgasm lwesitho sangasese sowesifazane kuye kwahlotshaniswa ukuntula e emomozini izindawo sowesifazane ethize sezinzwa. ochwepheshe Modern abatadisha daba, wagomela ngokuthi inkolelo-mbono Freud sika akulungile. Baveza ukuthi ungubani zinhlobo ezilandelayo orgasm besifazane:
Kwesitho sangasese. Uhlobo oluvame kakhulu orgasm, okuyinto lihlotshaniswa amadoda anamandla astray. Livela orgasm lwesitho sangasese sowesifazane kubantu besifazane kungenxa ngomshikisho wenduku odongeni esithweni sangasese. Amanye amadoda akholelwa ukuthi ikhomishana ukungqubuzana kwemibono ngokwanele ukuba intombi yabo ukuze uthole injabulo. Nokho, akuyona. uthando Mutual kakhulu ukuthuthukisa bazizwa futhi kuthinte isikhathi orgasm.
Umama. ukuncipha okukhulu kangaka kwenzeka ngoba orgasm lesizalo izindonga. Kuyaziwa ukuthi orgasm lesizalo abakwazi njalo nakho wesifazane. Ubonakala ikakhulukazi ezimweni lapho umthondo we umlingani uthola kwesibeletho, okungukuthi, kuncike ubude bayo. Nokho, lokho akusho ikakhulukazi ujabulele abanokuthile isithunzi kakhulu. It is eyaziwa ukuthi ukuluma njalo udonga umthondo kwesibeletho kuholela emdlavuzeni isitho zesifazane zokuzala.
Clitoral. Clitoris - omunye esishintshashintshayo erogenous of umzimba zesifazane. Lolu hlobo lwe-orgasm kwenzeka uma isenzo esiqondile emakhasini clitoris izandla, ulimi noma ipipi umlingani.
Inkjet. Lolu hlobo lwe-orgasm kwenzeka uma umthelela lo okuthiwa iphuzu «G», endaweni Graffenberga eyaziwa okuhlukile (igama udokotela abasithola). Point «G» itholakala at ibanga 2 kuya 5 cm lisuke emnyango sangasese, ngaphakathi, ku nodonga lwawo labaqaphi elingemuva. Isimo engcono sifinyelele "jet" orgasm is ukuma «doggy style» noma umgibeli indlela omi ngayo.
Okwamanje, izinhlobo orgasm wafunda ochwepheshe Sexology emhlabeni wonke. Ngokwesibonelo, inkolelo-mbono yokuziphendukela khona ukuxhuma okuthiwa orgasm kubo esanda kutholakala wethulwa. Litholakala ngempela ezingavamile futhi kwenzeka uma eqinile vibration zesifazane perineum. Isimo esifanayo singenzeka hhayi kuphela ngesikhathi ocansini, kodwa futhi ngebhayisikili noma ihhashi ogibele.
Lezi izinhlobo ezinkulu orgasm kwabesifazane, umlando alisho lutho ubani ngqo wafunda wudaba olubucayi ezifana. Nokho, lo mbono kwamukelwa futhi okukholakala ukuthi ilungile. Yiqiniso, ukuze zijabulise kumlingani wakhe, indoda akudingeki ngokugcwele abafundile ezindabeni isakhiwo yomzimba wowesifazane, Nokho, ezinye izinto usadinga ukwazi. Ngokuvamile, ulwazi lezi zinto zenzeka njengoba nifunda ukuba ompetha wokuya ocansini kukammangali. Ngesikhathi esifanayo, olwazini esihle nezinezimo erogenous yowesifazane akusona isiqinisekiso sokuthi lo, yena bayothola emizweni ongenakulibaleka ngesikhathi socansi. Esinye isici esibalulekile ekutholeni orgasm okukhulu imizwa yakho. Mhlawumbe, ukuze anelise ngokugcwele owesifazane, uma umthanda ngempela ...
BDSM - lena yinto ekhethekile ubuhlobo bobulili
"Petrogradets" - a eziyinkimbinkimbi ezemidlalo wonke umndeni
Abakan: nokuzwa, umlando kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Izimfihlo amaphupho: yini amaphupho owakuzala
Chicory: izakhiwo ewusizo kanye contraindications
Pancake ezazigxishwe cottage shizi - isidlo ephelele etafuleni lakho!